Ubuhle Nobubi Bokumakethwa Kwemidiya Yezenhlalo | Martech Zone
NgeSonto, Septhemba 21, 2014 Douglas Karr
Isisekelo se-infographic sithi okuhle nokubi, kodwa angazi ukuthi isishaye impela isipikili ekhanda. Okuhle (okuhle) konke kuyizibalo ezisemthethweni ezisekela imizamo yokuthengisa yezokuxhumana, kepha i-cons ikhuluma ngezikhala ekuqondeni, kumasu nasekuhlaziyweni ngaphezu kokumaketha nalokho okuphakathi. Ake sizithathe ngamunye ngamunye.
U-50% we-C-Suite aqinisekile wenani lezokuxhumana. Lokhu kungaba yizinkinga eziningi. Abasebenzi kungenzeka bangabi bikho ukulinganisa ngokunembile umthelela nokunikeza imibiko efanelekile kwi-C-Suite yabo. Kungenzeka futhi ukuthi abawuboni umthelela wesikhathi eside wokuxhumana kahle nezithameli zakho zenhlalo kanye ne- izinzuzo okunzima kakhulu ukuzikala.
Imithombo yezokuxhumana ilandisa kuphela i-1.14% yawo wonke ama-e-commerce traffic. Ngibiza okukhohlisayo ngalokhu ngezizathu eziningi. Okokuqala nokubaluleke kakhulu, iningi labantu lisebenzisa izinhlelo zokusebenza ukuxhumana nemithombo yezokuxhumana. Lena akuyona inombolo encane… kuze kufike ku-90% wakho Ukudluliswa kwemithombo yezokuxhumana akunakulinganiswa ngezibalo ngoba beza kusixhumanisi esiqondile kusuka kuhlelo lokusebenza. Ingasaphathwa eyethonya nokutholwa okunikezwa yimithombo yezokuxhumana. Ukuguqulwa kungenzeka kungenzeki ngokuhlangana okuqondile - kepha wonke umuntu uyakwazi lokho IZwi Lomlomo kunomthelela omkhulu kumikhiqizo nezinsizakalo esizithengayo - futhi ezenhlalo yiWOM.
Izinkampani ezingama-85% azixhumanisi imisebenzi yenhlalo nemiphumela yebhizinisi. Njengaku- # 1, lokhu akuyona into embi ngokumaketha kwezokuxhumana nabantu, lokhu kuyinkinga yezinkampani yangaphakathi. Amandla wokuxhumana ngempumelelo, ukubandakanya, ukukhulisa, ukuphakamisa, ukuqoqa impendulo nokunikeza ukuthintana namakhasimende akho kusebenza kahle ngemithombo yezokuxhumana. Uma izinkampani zingakusebenzisi, lokho kuyiphutha labo… hhayi iphutha lomphakathi.
I-imeyili isaphumelela ukwedlula imithombo yezokuxhumana ngokuguqulwa okungu-40 kuye ku-1. Akungabazeki… kepha uma unekheli le-imeyili lothile, lokho kusho ukuthi usuvele unobudlelwano nabo! Ezomphakathi zinikeza ithuba lokwakha ubudlelwano obanele bokuqoqa ikheli le-imeyili! Sabelana ngalokhu okuthunyelwe ku-Martech kwezenhlalo lapho kwabiwa khona… bese abantu beza kusayithi lethu bese babhalisela i-imeyili! Awukwazi ukuqhathanisa ama-apula namawolintshi kanjena.
Izinhlelo zemithombo yezokuxhumana zikhathazeka nge-CMOs's 6th-simo (amaphesenti angama-58). Okokuqala kwabo ukwenza ngcono izinqubo nokuhamba kweselula. Angizukusigxeka lesi simiso… imithombo yezokuxhumana ngokuba udaba oluphezulu lwe-6 ikukhombisa isisindo esinaso ngaphezu kwamanye amasu. Inothi elilodwa kulokhu, noma kunjalo… Okomphakathi yiSelula… Ucabanga ukuthi kungani wenza indawo yakho yeselula isebenze kahle? Sesha? Yebo… kodwa ezenhlalo nazo zibalulekile.
Lokhu okusha I-OutMarket infographic ihlola umbono wokuthi imithombo yezokuxhumana kufanele ube nayo yemikhiqizo namuhla, kepha iqiniso lokuthi kungani ama-CMO eyibuza nokuthi ayini amandla nobuthakathaka bayo beqiniso. Yini enhle nokubi yokumaketha kwezokuxhumana? Bheka okuhle bese uzishaya emhlane ukuze ukwenze kufanele enhlanganweni yakho. Ngemuva kwalokho, bheka okubi bese ulandela izeluleko zethu ezintathu ukuze uqiniseke ukuthi ukhombisa inani lomphakathi futhi ulibophelela emiphumeleni.
Tags: kpis yebhizinisiimiphumela yebhizinisii-c-suiteithrafikhi ye-ecommercei-imeyili idlula ezokuxhumanai-imeyili uma kuqhathaniswa nabezindaba zenhlaloumakhala ekhukhwiniUkubuyekezwa okuku-inthanethiividiyo e-intanethiumsebenzi womphakathiukukhangisa komphakathiezenhlalo nezamaselulaezentengiso yenhlaloukuzibandakanya komphakathiisu lokuxhumana kwezenhlaloinani lezokuxhumanaababukeli be-tv
Kumele ngivumelane nesitatimende mayelana nokwamukelwa kokubaluleka kokumaketha kwezokuxhumana. Izinkampani eziningi aziwuqapheli umthelela ukumaketha kwezokuxhumana nabantu, noma ukuntuleka kwawo, okungaba nawo ebhizinisini lawo.
Dec 24, 2014 ku-5: 31 AM
Sawubona Douglas ukuqhathanisa kwakho phakathi kokuhle nokubi mayelana nokumakethwa kwezokuxhumana kuzithinte impela izipikili. Ngempela ngikususile ukungaqondakali kwami ​​ngokuqhathanisa kwakho ngezinto ezithile ebenginazo engqondweni yami.